Top 8 Ọrụ Nhọrọ na ọrụ na-enye ụgwọ ọnwa na India
Tupu achọ a ọrụ, otu ihe na onye ọ bụla na-adịkarị na-ewere bụ ego ma ọ bụ akwụ ụgwọ. Ee, ahuhu bụ ihe na-eduga ná oganihu ma na njedebe nke ụbọchị, mgbe ị na-aga azụ n'ụlọ ike gwụrụ, niile ị chọrọ bụ ụfọdụ nkasi obi na okomoko. Ya mere, ọ bụ mgbe niile ka mma na-edebe gị ihe mgbaru ọsọ na a oké elu ebe i nwere ike imeli ihe nile nke nkasi obi kama mwube obere ihe mgbaru ọsọ. E nwere ụfọdụ ọrụ na-abịa na a otutu elele na-akwụ ụgwọ. Following is a list of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
Na nke ugbu a azụmahịa ọgbọ, elu aha e wuru maka ndị na-management na multitasking nkà. Ọ bụghị a nnọọ ụtọ na njem na ntinye larịị. Otú ọ dị, mgbe ị na-kwụpụ elu iji elu ibu ọrụ na mkpebi Filiks, gị ụgwọ ọnwa na-na-agụsi. All ị na-achọ bụ a management ogo si a maara nke ọma na ulo akwukwo. Nke a bụ otú CEOs ugbu a na-akpata ego na nnukwu. The ụlọ ọrụ na-aga na-enye gị dị iche iche na elele na gị ụgwọ.
Dọkịta na-chọrọ na niile ụdị nke mberede ọnọdụ na nkà ha bụ nke elu uru ke otu. Ozugbo ị mụtachara Medicine, ị nwere ike ịga n'ihu na-amalite na gị onwe gị onwe ụlọ ọgwụ ebe oge ego na-abịa ruo a nnukwu ego. Ịbụ dọkịta bụghị naanị na ọ kpọtara gị ego ma na-akwụ gị ụgwọ na otutu aha ke otu. Medical ọkachamara bụ nke dị iche iche na edemede, dị ka ọmụmaatụ, ụlọ, ophthalmologists etc.
IT ụlọ ọrụ na-booming ugbu a. Na technology dochie ọ bụla ntuziaka ọrụ, IT ngwọta na-na a na nnukwu ina. E nwere ọtụtụ nke na nduzi na software na kọmputa dabere na ngwa ụbọchị ndị a. Ya mere, e nwere ọtụtụ ohere irite a Ukwu ego.
Chartered Accountancy na CFAs
Accountancy bụ ihe dị oké mkpa mmewere ọ bụla siri ike. Ị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu dị ka ị na-achọ ka ọ bụ otu n'ime ndị dị mkpa a chọrọ otu nzukọ. Iji na-ha akwụkwọ na-emebibeghị, auditing a chọrọ na akụkụ bụ isi nke atụmatụ usoro bụ kwa afọ ego atụmatụ. N'ihi ya, CAS na CFAs nwere nnukwu akporo na ndị ụlọ ọrụ.
Business amụọ na-anọkwasị na dị iche iche ebe, nke mere na e nwere mkpa maka ma ọchụ nta ego ndị mmadụ nkịtị na-efe ezi mgbe. Ha dị njikere imefu nnukwu ego na flights. The ụgbọelu oru na-booming na ihe unbelievable ọsọ. Ya mere, akwọ, ụgbọ elu na-eje ozi, n'ala mkpara, ikuku hostesses etc bụ na ina.
Entertainment ụlọ ọrụ
Entertainment bụ ụlọ ọrụ nke dị n'elu na-enye onyinye a nnukwu ihe na aku na uba dị ka a dum. The nkwado nlekiri ụlọ ọrụ amụọ na ịtụnanya ichekwa na ndị ọkachamara dị ka eme ihe nkiri, ụdị, nka akpakọba a nnukwu ndibiat nke akụ na ụba dị iche n'ebe ọrụ ha na ndị ụlọ ọrụ site mkpọsa ngwá ahịa. Ozugbo ha mere a ụzọ onwe ha, na elu na ha ịgba.
Na ọtụtụ jide ikpe, ọkàiwu na-na nnukwu ina. Iwu bụ a ubi na nke ọ bụrụ na ị họrọ ụzọ ziri ezi na-arapara n'ahụ gị na ụkpụrụ, ị ejedebe ịkpata ma akụ na ụba na afọ ojuju. E nwere mgbe ụfọdụ i nwere ike iduhie unu. Na-obibi na ọ bụ ike. Otú ọ dị, ị na-ọdịda na nsọpụrụ, uru na ego na njedebe nke ụbọchị.
Sports bụghị a cup tii maka onye ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị na-nkà na-enweta ezi egwuregwu nkà ziri ezi na gị na nwata, nnọọ na ị ga-eme ka ihe njirimara maka onwe gị na ubi. Ọ bụghị ihe dị mfe ọrụ, ikwu eziokwu. ma, ozugbo ị na-eme gị njirimara na ubi, ị na-akpata ego ọ bụghị naanị site na egwuregwu i kamakwa site na-eme mkpọsa ngwá ahịa na mgbasa ozi. Nke a na-eduga ná ama a dị nnọọ mma n'ụzọ.
The n'elu bụ n'elu 8 ọrụ nhọrọ nke na-agọzi gị na ọrụ na-enye ụgwọ ọnwa ma na aha n'otu oge. Otú ọ dị, a ọtụtụ ọrụ ike, nraranye na-eso ụzọ nke ziri ezi na-achọrọ.
« Obi ụtọ na Australia ụbọchị 2018 chọrọ, Quotes, SMS, ozi, Images, ekike
Letter na nchịkọta akụkọ banyere mmiri na-egbu osisi nsogbu n'oge udu mmiri »